यी ६ चिजहरु घरबाट हटाइहाल्नोस ! नत्र, आर्थिक स*मस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सकिदैन… – Butwal Sandesh
यी ६ चिजहरु घरबाट हटाइहाल्नोस ! नत्र, आर्थिक स*मस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सकिदैन…
वास्तुशास्त्रअनुसार कुनै बस्तु घरमा वा व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउमा राख्दा नफाप्ने हुन्छ। यी ६ चिज तपाइको घरमा वा व्यापार गर्ने ठाउँमा छ भने तुरुन्त हटाईहाल्नुहोस्। यी चिजहरु घरमा राख्दा आर्थिक स*मस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सक्दैन। हरेक दिन कुनै न कुनै समस्याले घेरीरहन्छ।ति ६ चिज के-के हुन् त आउनुहोस जानीराखौ:
१. नटराजको मुर्ति : नटराजको मुर्तिमा भगवान शिव ताण्डव नृत्यको रुपमा हुनु हुन्छ । जुन विनाशको सूचक मानिन्छ । त्यसैले घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ ।
२. ताजमहलको तस्बिर : ताजमहल सुन्दर हुनुको साथ – साथै चि*हान पनि हो । ताजमहल मृ*त्युसंग जोडिएको छ त्यसैले यस्को तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नु हुदैन ।
३. डु´ब्न लागेको जहाज : पानीमा डुब्न लागेको जुन सुकै बस्तु वास्तुशास्त्रअनुसार अशु°भ मानिन्छ । घर सजाउन राखिएको पानीजहाजको तस्बिर तपाइको घरको सोभा बढाउनुको सट्टा घट्न सक्छ। आर्थिक समस्या आउन सक्छ त्यसैले पानीजहाजको तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नुहोस्।
४. जंगली जनावर : घर सजाउने बहानामा हामी ह्रिं*सक जंगली जनावरको तस्बिर राख्ने गर्छौ। यस्ता जनावरको तस्बिर घरमा राख्दा मानिसको स्वभाव पनि उस्तै हुने गर्छ।
५. महाभारत र ग्रन्थ: महाभारत पुजनीय ग्रन्थ हो। तर यसलाई घरमा राख्नु अशु°भ मानिन्छ। यो पारिवारिक झगडाको कहानी हो। यसलाई घरमा राख्दा घरमा झैँ झगडा बढ्ने, त*नाव बढ्ने हुन्छ।
६. शंखको साथमा रथ : रथ यु*द्धमा उपयोग हुने बस्तु हो भने शंख युद्ध शुरु हुन लाग्दा बजाईन्छ। त्यसैले यी दुइ बस्तु संगै राख्नु हुदैन। यसले घरमा अशा*न्ति पैदा गर्ने गर्छ।
माथी उल्लेख गरिएका बस्तुहरु नराख्दैमा वा घरमा भएको चिज हटाउदैमा घरमा तुरुन्तै शान्ति र धनवान भैहालिन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला । यी सबै किम्बदन्ती हुन । कर्ममा बिश्वास गर्नुहोस । कुल हुन सिक्नुहोस । शान्ती र लक्ष्मीले आफै बाँस गर्नेछ ।